'It's a nightmare': Zimbabwe struggles with hyperinflation - SFChronicle.com
By FARAI MUTSAKA, Associated Press Oct. 10, 2019 Updated: Oct. 10, 2019 5:36 a.m.
1of5A woman does a quick calculation on her phone before buying groceries at a shop in Harare, in this Wednesday, Oct, 9, 2019 photo. Hyperinflation is changing prices so quickly in the southern African nation that what you would see displayed on a supermarket shelf might change by the time you reach the checkout.Photo: Tsvangirayi Mukwazhi, AP
2of5Vendors who make a living from pushing customer trollies, wait for customers outside a supermarket in Harare, in this Wednesday, Oct, 9, 2019 photo. Hyperinflation is changing prices so quickly in the southern African nation that what you would see displayed on a supermarket shelf might change by the time you reach the checkout.Photo: Tsvangirayi Mukwazhi, AP
3of5A man takes images of goods in a shop to share before buying them in Harare, in this Wednesday, Oct, 9, 2019 photo. Hyperinflation is changing prices so quickly in the southern African nation that what you would see displayed on a supermarket shelf might change by the time you reach the checkout.Photo: Tsvangirayi Mukwazhi, AP
4of5Vendors who make a living from pushing customer trollies wait for customers outside a supermarket in Harare, in this Wednesday, Oct, 9, 2019 photo. Hyperinflation is changing prices so quickly in the southern African nation that what you would see displayed on a supermarket shelf might change by the time you reach the checkout.Photo: Tsvangirayi Mukwazhi, AP
5of5A woman heads home after buying a few items from a supermarket in Harare, in this Wednesday, Oct, 9, 2019 photo. Hyperinflation is changing prices so quickly in the southern African nation that what you would see displayed on a supermarket shelf might change by the time you reach the checkout.Photo: Tsvangirayi Mukwazhi, AP